Mitovy amin'ny Amerikana Roulette amin'ny lafiny rehetra afa-tsy noho ny tsy fisian'ny ny '00' isa, Eoropa Roulette Gold dia hafa koa i Microgaming mahazatra Casino lalao. Mampiseho toetra miavaka eo amin'ny ny sary, feo sy ny famolavolana, ny Gold andian-dahatsoratra no catapulted Microgaming ho any an-tampon'ny tary.
Ny mahazatra roulette kodiarana sy ny latabatra sy ny 3×12 Grid mampiseho ny isany avy 1 to 36 dia hita. Ny tokan-tena '0' dia apetraka tsara amin'ny an-tampon'ny Grid ity. Afaka manao na anatiny sy ivelany na filokana amin'ny isa tsara vintana ianao tany amin'ny tsara slot ny kofehy kodiarana.
Ny fanampiny hilokana safidy azo ny mpilalao no Neighbour Bet sy Call Bet. Afaka misafidy ny isa sy ny manao mahitsy Bet eo aminy miaraka amin'ny isa ny mifanila niakatra ho any ny sokajy ny 9 isa (efatra teo an-daniny). Antsoy Bet dia mametraka ny loka amin'ny fizarana ny roulette kodiarana.
• Straight Bet -Bet tamin'ny isa iray, 35:1 payout
• Corner Bet - Bet amin'ny andian-tsoratra ny 4 isa, 8:1 payout
• dimy Number Bet - Bet amin'ny 5 isa (0, 00, 1, 2, 3), 6:1 payout
•-dalana, Bet – Bet amin'ny 6 isa amin'ny 2 mifanila andalana, 5:1 payout
• Tsanganana Bet - Bet amin'ny 1 ny 3 andry, 2:1 payout
• ampolony Bet - Bet amin'ny 12 maro ny avo, ambany na afovoany andian-tsoratra, 2:1 payout
• Na dia Money Bet - Bet amin'ny 18 isa (na dia, hafahafa, mainty na mena), 1:1 payout
tsara natao, mahagaga sary, mazava interface notapatapahina ho Eoropeana Roulette Gold iray toerana tena rehetra vetivety Casino mpilalao. Ny fananana ny manam-pahaizana fomba ahafahana safidy tsara kokoa ny fifehezana ny lalao sy ny vola. Handefa mahazatra izany tsara tarehy mba hiaina ny tena fientanam-po ny hilokana sy handresy.